ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၂-၆-၂၀၁၃ - ညပိုင်း)
မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၂-၆-၂၀၁၃ - ညပိုင်း)
- ဖယ်ဒရယ်မူ ကျင့်သုံးဖို့ ဖွဲ့စည်းပုံကို အမြန်ပြင်ပါဟု ဇိုမီးခေါင်းဆောင် ပြောဆို (ရုပ်သံ) click
- နိုင်ငံသားမဟုတ်သူများ ပါတီထူထောင်ခွင့်နှင့် မဲပေးပိုင်ခွင့်ကို ဖျက်သိမ်းပေးရန် RNDP တောင်းဆို click
- NLD ရခိုင် ၈ မြို့နယ် သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်အပေါ် ခေါင်းဆောင်တချို့ တုံ့ပြန် click
- မောင်တောဆူပူမှုတွင် ၀ရမ်းပြေးဖြစ်နေသူများကို အာဏာပိုင်များက ငွေယူ၍ ရွာတွင် လက်ခံထား click
- ရှမ်းတွေလည်း လူရိုင်းတွေ ဖြစ်ကုန်တော့မယ် (သူ့အတွေး သူ့အမြင်) click
- နတလ စံပြကျေးရွာအတွက် မြေသိမ်းပြီး လျော်ကြးမပေး click
- ရန်ကုန်မြို့တွင်း ဂျာနယ်ရောင်းအားများ ကျဆင်းနေ click
- လူသားချင်းဆိုင်ရာ ကူညီထောက်ပံ့မှုများ လျော့ကျလာသည့်အပေါ် ကရင်အဖွဲ့အစည်းမှ စိုးရိမ် click
- ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်တွင် ဆရာဝန် အလုံအလောက်မရှိ၍ ဒေသခံလူထု အခက်တွေ့ click
- ဒုက္ခသည်တွေ စခန်းတွေကြောင့် ဆင်အိုင်ရွာက ကျောင်းသားတွေ ကျောင်းတက်ဖို့ အခက်အခဲဖြစ် click
- UNICEF မှ သူငယ်တန်း ကျောင်းသုံးစာအုပ်များ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် အခမဲ့ ဖြန့်ဝေ click
- ကျောင်းကြိုပို့ ဘတ်စ်များ ပြေးဆွဲလိုလျှင် မထသသို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပြီ click
- မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ပြေး သင်္ဘောခ ကောက်ခံမှုနှုန်း တိုးမြှင့်သွားမည် click
- ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ... အလိုရှိသည် click
- ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တဦးရဲ့ နေအိမ်ကို မီးရှို့တိုက်ခိုက်တဲ့အတွက် လူ ၆ ဦးကို ဘင်္ဂလာရဲက ဖမ်း click
- အသက် ၁၃ နှစ် ကျောင်းသားတယောက် ကိုယ့်ကိုယ်ကို သေနတ်ဖြင့် ပစ်သေ click
- ပြင်သစ်တွင် ကျောင်းသားများကို အိမ်စာပေးခြင်းကို တားမြစ် click
- ၂၆-၅-၂၀၁၃ အာရှသတင်း အာရှရှုခင်း (ရုပ်သံ) click
- ၁၉-၅-၂၀၁၃ အာရှသတင်း အာရှရှုခင်း (ရုပ်သံ) click
- ၅-၅-၂၀၁၃ အာရှသတင်း အာရှရှုခင်း (ရုပ်သံ) click
မလေးရှားနိုင်ငံ ဆာလာရမ်းမြို့ ရန်ပြုမှု မြန်မာနိုင်ငံသား ၂ ဦး သေဆုံးသွားတဲ. ကိစ္စ
... အစိုးရ မှ စုံစမ်း သတင်းထုတ်ပြန်သင်.တယ် ၊
ပြည်ပ မှာအလုပ် လုပ်သူတွေ အန္တရာယ်ရှိရင်လည်း
ဒေသအလိုက် သတိပေးချက်ထုတ်ပြန် သင်.ပါတယ် ၊
... အင်ဒို နီးရှားမှာအသတ်ခံရတဲ. မြန်မာ ၁၁ ယောက်
ကိစ္စ လည်း အစိုးရရဲ. လုပ်ဆောင်ထားချက် ပြည်သူတွေကို အသိပေးသင်.ပါတယ် ။